အမှိုက်ကားနိယာမ ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 10:02 PM | No မှတ်ချက် | Aye Chan Mon
တော်သေးတာပေါ့။ တက္ကစီသမားက ဘရိတ်ကို အမြန်ဆောင့်နင်းချလိုက်ပေလို့။ မဟုတ်ရင် ကျွန်တော်ရော တက္ကစီသမားပါ ပွဲချင်းပြီး သေနိုင်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ
တဖက်ကားလူက ဆင်းလာ ပြီးတော့ တက္ကစီသမားကို ဆဲဆိုပါလေရော။
ကျွန်တော်ကမေးတယ်။ "ဦးလေး! ဒီလူက စမိုက်ရိုင်းတာလေဗျ။ သူ့ကွေ့ကြောက ဦးစားပေး မှမဟုတ် ပဲ အရှိန်နဲ့ တက်လာပြီးတော့.. တိုက်ကုန်ရင် ဦးလေးရော ကျွန်တော်ရော သေသွားနိုင်တယ်။ မသေတောင် ဆေးရုံတော့ အနည်းဆုံးရောက်မှာ။ အဲ့ဒါကိုတောင် မကျေမနပ်နိုင် သူကပဲ
ဆင်းလာ ရန်ရှာ ရတယ်လို့။ အဲဒါကို ဦးလေးက ဘာလို့ ငြိမ်ခံရတာတုန်း!"
တကယ်အေးချမ်းတဲ့ဘဝပိုင်ရှင်တွေဟာ ဘယ်တော့မှ အမှိုက်ကားလို လူတွေရဲ့ အမှိုက်ပစ်တဲ့နေရာ အဖြစ်မခံကြဘူးဗျ။ ဘဝဆိုတာ တိုတောင်းလွန်းလှပါတယ်။ ဘယ်သူမှ
အမှိုက်တွေနဲ့ နံစော်ပြီးတော့ နေ့စဉ် မနိုးထသင့်သလို အမှိုက်ကိစ္စတွေနဲ့ချည့်ပဲ အချိန်ကုန် မနေသင့်ဘူး။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ နေ့ရက်တွေ ပိုင်ဆိုင်လာစေဖို့ အမှိုက်ကားနဲ့တူတဲ့ လူတွေကို ပြုံးပြပြီး နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာ